Iswiidhen oo finaal u gudubtay kadib markii ay badisay Finland - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Erik Karlsson oo u dabbaaldegaya gool u dhaliyey. Sawirle: Petr David Josek/TT
Sawirle: Matt Slocum/TT
Sawirle: Matt Humphrey / AP
Sawirle: David J. Phillip / AP
Goolkii ay Iswiidhen ku bareejeysey. Sawirle: Alexander Nemenov/TT
Sawirle: Matt Slocum / AP
Sawirle: Petr David Josek/TT
Iswiidhen oo finaal u gudubtay kadib markii ay badisay Finland
Waxaa maanta duhurnimadii madaxa isla galay kooxda xeegada barafka wiilasha ee Iswiidhen iyo kooxda Finland. Cayaartaan oo ah semifiinaal ayaa waxaa qabtay garoonka ka ahaydhadda garoonka Bolsjojo o ku yaal magaalada Sotji ee dalka Ruushka.
Intii lagu dhexjirey qaybtii labaad cayaarta ayey kooxda Finland gool kala hormartay kooxda Iswiidhen oo sidaas ay cayaartu ku noqotay 1 gool oo Finland leedahay iyo Iswiidhen oo 0 ah. balse toban daqiiqo kadib ayey kooxda Iswiidhen bareejeysey kadib markii ay kubbadda ku hubsatay shabaqa goolka Findland. Toban daqiiqo kadib ayey Iswiidhen labaad kubbadda gudaha u dhigtay goolka Finland oo sidaas ku hoggaamisey 2-1 cayaarta.
Cayaartu waxay socoto oo la isa sigaba, oo dadkii kala taageersanaa labada kooxood ay wadnefug iyo walaac ku reebtaba, ayuu garsoorihii cayaartu firimbiga yeeriyey kolkii ay saacaddu ku istaagtey 15:17. Sidaas ayeyna Iswiidhen ugu gudubtey cayaarta kama dambeysta ah ee fiinaalka oo ay isaga hor iman doonaan kooxda ku soo badisa cayaarta maanta dhexmareysa kooxaha Kanada iyo Maraykanka.
Maxay kula tahay in ay Iswiidhen ka qaadi doonto cayaarta icehockey:ga?